Ukuhlala eMontreal ngobuhle - I-Airbnb
Ukuhlala eMontreal ngobuhle
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguKarl
Eli ligumbi lokuhlala elisanda kulungiswa elinendawo enkulu yokuhlala. Ineefestile ezinkulu ezibukekayo ezizaliswe lilanga. Indlu ibekwe kwisitalato esinendlela enye ethe cwaka.
Indawo kuhambo olufutshane lwemizuzu emi-5 ukuya kwi-Mail Champlain kunye nesinye sesikhululo sebhasi esiseMazantsi eShore, ePanama. Kumgama omfutshane wemizuzu emi-2 ukuya kwisithili sokuthenga se-dix30. Ukwanalo nofikelelo olukhawulezileyo kuzo zontathu iibhulorho kwaye ukhawuleza ngemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya edolophini yaseMontreal. Kukho indawo yokupaka yobuqu yasimahla kwisiza.
Eli gumbi lihlala likhaya kakhulu kwaye linendawo enkulu yokuhlala ethe kratya ebekwe kwindawo evulekileyo ekhanyayo kunye nophahla oluphezulu lweemitha ezili-10. Zonke iindawo zokuhlala zinkulu kakhulu kwaye ziphumle. Iyakwazi ukuhlalisa abantu ababini ngokukhululekileyo kunye negumbi layo elikhulu lokulala elikhulu, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye neveranda yokugcina. Igumbi lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela linebhafu epheleleyo eneshawa, indlu yangasese kunye nesinki enewasha kunye nesomisi efihlwe kude kwikhabhathi.
Le ndlu ivuleke kakhulu kwaye ikhanyiswe ngezipili ezinkulu. Inazo zonke izinto eziluncedo zokwenza ukuhlala kwakho kumangalisa kangangoko unakho kubandakanya isantya esiphezulu se-Intanethi ye-Wi-Fi, iitawuli, amalaphu obuso, isepha, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-oveni, iwasha kunye nesomisi. Ikhitshi ixhotyiswe nge-coffee percolator, i-toaster, i-grill cheese maker, njl.
Le ndlu ikwisitalato esifutshane esinendlela enye enabantu abambalwa. Isitrato sinelizwe elithandekayo kunye nethoni yokuphila okunempilo! Kukho ukufikelela ngokukhawuleza kwisekethe yomzila webhayisekile.
Into emnandi kukuba sihlala kamnandi kodwa sinofikelelo olusondeleyo (kumgama wokuhamba) kwenye yeevenkile ezinkulu (Mail Champlain) kule ndawo kunye neendawo zokutyela ezininzi, iibhari kunye neevenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- Karl
Ndihlala kwisiza (ezantsi) kwaye ndiyafumaneka ukuba unemibuzo... okanye naziphi na iingxaki...
Ngamanye amaxesha, ndiyakwazi ukuncokola neendwendwe. Kwinkcubeko yam kubalulekile ukwenza iindwendwe zizive zisekhaya. Ngaphambili bendibamemela kwimisebenzi yasekuhlaleni.
Ngamanye amaxesha, ndiyakwazi ukuncokola neendwendwe. Kwinkcubeko yam kub…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brossard